သငျ့အနနေဲ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ လယောဉျဖွငျ့ ခရီးသှားတော့မယျဆိုရငျ အခွခေံအားဖွငျ့ သိထားသငျ့သညျ့အခကျြမြား။ – SoShwe
Home/LifeStyle/သငျ့အနနေဲ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ လယောဉျဖွငျ့ ခရီးသှားတော့မယျဆိုရငျ အခွခေံအားဖွငျ့ သိထားသငျ့သညျ့အခကျြမြား။
သငျ့အနနေဲ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ လယောဉျဖွငျ့ ခရီးသှားတော့မယျဆိုရငျ အခွခေံအားဖွငျ့ သိထားသငျ့သညျ့အခကျြမြား။
admin December 16, 2021	LifeStyle Leaveacomment
၁။ လယောဉျပျေါကို သယျဆောငျခှငျ့မပွုသညျ့ ပစ်စညျးမြားကို သိရှိအောငျ အရငျ ပွုလုပျပါ။
တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ ခရီးထှကျဖို့ အထုပျအပိုးပွငျတော့မယျဆိုရငျ သငျ ယူဆောငျလာမယျ့ ပစ်စညျးတှဟော လယောဉျပျေါကို သယျဆောငျခှငျ့ပွု၊ မပွု အရငျဆုံးသိအောငျ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ ထို့နောကျမှသာ အထုပျအပိုးထညျ့တာက အကောငျးဆုံး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
၂။ လဆေိပျသို့ မသှားမီ မိမိသှားရမယျ့ Terminal နံပါတျကို သိအောငျ လုပျပါ။
အထူးသဖွငျ့ လဆေိပျကွီးတှမှောဆိုရငျ Terminal တှေ တဈခုနဲ့တဈခု အရမျးဝေးကှာနတေတျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ မိမိသှားရမယျ့ Terminal နံပါတျကို ကွိုတငျသိရှိမယျဆိုရငျ အခြိနျကုနျ၊ လူပငျပနျး သကျသာစမှော ဖွဈပါတယျ။
၃။ လယောဉျမထှကျခှာမီ လဆေိပျမှာ စောငျ့နရေမယျ့အခြိနျတှအေတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားပါ။
မုံမှနျအားဖွငျ့ ပွညျတှငျးခရီးဆိုရငျ (၂)နာရီ၊ ပွညျပခရီးဆိုရငျ (၃)နာရီ လယောဉျမထှကျမီအလငျြ လဆေိပျသို့ရောကျအောငျသှားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ထိုသို့ လယောဉျစောငျ့ဆိုငျးနရေမယျ့ အခြိနျမြိုးမှာ အခြိနျကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခနြိုငျအောငျ မိမိလုပျစရာရှိသညျ့ ကိစ်စရပျမြားအတှကျ ကွိုတငျ ပွငျဆငျသှားသငျ့ပါတယျ။
၄။ Check in လုပျဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ လယောဉျမထှကျခှာမီ တဈနာရီအလိုဖွဈစေ၊ Online ကနေ အခြိနျစော၍ဖွဈစေ ကွိုတငျ Check in လုပျလို့ရပါတယျ။ မိမိထိုငျခငျြတဲ့ နရောကို စိတျကွိုကျ ရှေးခယျြလို့ရတာကွောငျ့ Check in စောစော ပွုလုပျဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။
၅။ အရေးကွီးပစ်စညျးမြားကို လကျကိုငျအိတျထဲသို့ ထညျ့၍ မိမိနဲ့အတူတူ သယျဆောငျသှားပါ။
လယောဉျပျေါသို့ ခရီးဆောငျအိတျကို မိမိနဲ့အတူတူ ယူဆောငျသှားလို့မရပမေယျ့ လကျကိုငျအိတျ (Hand Carry) တော့ ယူသှားလို့ရပါတယျ။ ဖုနျး၊ ပိုကျဆံအိတျ၊ Lap Top ၊ Passport နဲ့ အခွားအရေးကွီးပစ်စညျးမြားကို ထိုလကျကိုငျအိတျထဲသို့ ထညျ့ထားလို့ရပါတယျ။
၆။ အပွငျမှာ ပူသညျဖွဈစေ၊ အေးသညျဖွဈစေ၊ မိမိနဲ့အတူ လယောဉျပျေါသို့ ဆှယျတာတဈထညျ ယူဆောငျသှားပါ။
မိမိသှားမယျ့ နရောအပျေါ မူတညျပွီး ပွငျပ ရာသီဥတု အပွောငျးအလဲကွောငျ့ဖွဈစေ၊ အပူခြိနျအပွောငျးအလဲကွောငျ့ဖွဈစေ၊ လယောဉျပျေါတှငျ အလှနျအေးနိုငျသောကွောငျ့ ဆှယျတာတဈထညျ ယူဆောငျသှားသငျ့ပါတယျ။
၇။ ခရီးဆောငျအိတျ အမြားကွီး သယျဆောငျသှားခွငျမြိုးကို ရှောငျကွဉျပါ။
လယောဉျပျေါသို့ သယျဆောငျလို့ရတဲ့ အလေးခြိနျပမာဏကို သတျမှတျထားသောကွောငျ့ ယူဆောငျသှားလို့ရတဲ့ ပမာဏနဲ့ ခြိနျဆပွီး ခရီးဆောငျအိတျကို ပွငျဆငျသငျ့ပါတယျ။
၈။ ခရီးရှညျဖွဈပါက သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစမေယျ့ အဝတျအစားကိုသာ ဝတျဆငျပါ။
သငျ့ရဲ့ ဝတျပုံစားပုံနဲ့ ပကျသကျပွီး အရမျးကွီး မစိုးရိမျပါနဲ့။ အဓိကကတော့ အကွာကွီးသှားရမယျ့ ခရီးရှညျတဈခုကို သကျတောငျ့သကျသာဖွဈအောငျ သှားဖို့ကသာ အရေးကွီးပါတယျ။
၉။ လုံခွုံရေးအရ စဈဆေးခံရပွီးနောကျ လယောဉျထှကျခှာမညျ့နရောတှငျ စောငျ့ဆိုငျးပါ။
လုံခွုံရေးအရ စဈဆေးခံရပွီးနောကျပိုငျး သငျ့ လယောဉျထှကျခှာမညျ့ ဂိတျကို သိရှိအောငျ လုပျပါ။ သငျ့ရဲ့ Boarding Pass တှငျသာမကပဲ လဆေိပျအတှငျးရှိ Monitor အခြို့မှာလညျး လယောဉျထှကျခှာမညျ့ Gate ကို ဖျောပွပေးနပေါလိမျ့မယျ။
၁၀။ လယောဉျပျေါတကျကာနီးတှငျ သငျ့ရဲ့ ထှကျခှာခှငျ့ (သို့) Passport ကို စဈဆေးပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ရဲ့ ထှကျခှာခှငျ့ (သို့) Passport နဲ့ အခွားသကျဆိုငျတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှကေို ဂရုစိုကျ၍ လကျကကိုငျဆောငျသှားပါ။ တကယျလို့ ပွညျတှငျး ခရီးစဉျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ Passport ပွစရာ မလိုပါဘူး။
၁၁။ လယောဉျစီးနခြေိနျတှငျ ပီကဝေါးခွငျးက သငျ့ကို သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
လယောဉျ ထှကျခှာခြိနျနဲ့ လယောဉျ ဆိုကျရောကျခြိနျတို့တှငျ ရုတျတရကျဖွဈပျေါလာသော လထေုအပွောငျးအလဲကွောငျ့ နားအူခွငျး၊ နားပိတျခွငျးတို့ကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ဖိအားအခြို့ကို လြော့ကဖြို့ဆိုရငျ နှာခေါငျးကိုပိတျထားပွီး ပါးစပျဖွငျ့ လကေို ရှူထုတျပေးပါ။ နောကျတဈနညျးအားဖွငျ့ ပီကဝေါးနခွေငျးကလညျး လဖေိအားအပွောငျးအလဲဒဏျကို သကျသာစပေါတယျ။
၁၂။ ပွတငျးပေါကျနဲ့ ကပျလကျြထိုငျခုံမှာ ထိုငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ လယောဉျနဲ့ ပထမဦးဆုံး ခရီးသှားဖူးတာဆိုရငျ အပျေါစီးမှ မွငျတှရေ့မယျ့ သဘာဝရှုခငျး၊ မွငျကှငျးတှကေို ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ (တကယျလို့ ပွတငျးပေါကျဘေးမှာသာ ထိုငျမယျဆိုရငျပေါ့) ရငျသပျရှုမောဖှယျကောငျးတဲ့ ရှုခငျးတှေ၊ မွငျကှငျးတှကေို ရိုကျယူနိုငျဖို့အတှကျလညျး ဖုနျးကို အဆငျ့သငျ့ထုတျထားပါ။ (Airplane Mode တော့ လုပျထားပေးဖို့ လိုပါတယျနျော . . .)
၁၃။ လယောဉျပထမဆုံးစီးဖူးတဲ့သူဆိုရငျ လယောဉျမူးခွငျးဒုက်ခကို ကွုံတှနေို့ငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ခရီးစဉျဟာ ပငျြးဖို့ကောငျးနတေယျဆိုရငျတောငျ ခြောခြောမှမှေ့ဖွေ့ဈဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ မူးဝပွေီး အော့အနျခငျြတယျလို့ ခံစားရတယျဆိုရငျ သငျ့ထိုငျခုံမှာ အသငျ့ရှိနတေဲ့ အိတျကို အသုံးပွုလို့ရပွီး လယောဉျပျေါမှ တာဝနျရှိသူတှထေံမှ သောကျရကေို တောငျးလို့ရပါတယျ။ တကယျလို့ အခွအေနဆေိုးတဈခုခုကွုံတှရေ့ပါက (ရာသီးဥတု ဆိုးရှားခွငျး၊ မွူနှငျးမြား ဖုံးနခွေငျး) လယောဉျမှူးမှ ကွိုတငျ သတိပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၄။ လယောဉျပျေါရောကျပွီဆိုတာနဲ့ ဖုနျးကို Airplane Mode လုပျဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
လယောဉျပျေါသို့မတကျမီ စာပို့ခွငျး၊ ဖုနျးပွောခွငျးနဲ့ အခွား ဖုနျးအသုံးပွု၍ လုပျစရာရှိသညျ့ ကိစ်စရပျမြားကို အပွီးသတျလုပျဆောငျပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လယောဉျပျေါသို့ ရောကျပွီဆိုတာနှငျ့တပွိုငျနကျ သငျ့ဖုနျးကို Airplane Mode လုပျထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၅။ နားပိတျတဲ့အဆို့ကိုလညျး လိုရမယျရ ဆောငျသှားပါ။
တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ ခရီးရှညျသှားရမယျဆိုရငျ အျောဟဈငိုယိုနတေဲ့ ကလေးငယျတှေ၊ အိပျသညျ့အခါ ဟောကျတတျတဲ့သူတှေ လယောဉျပျေါမှာ ပါလာခဲ့မယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ အနားယူနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ထို့ကွောငျ့ လိုရမယျရ နားပိတျတဲ့အဆို့လေးကို ယူဆောငျသှားဖို့လညျး အကွံပွုပါရစေ။
၁၆။ သငျသှားမယျ့ခရီးစဉျက နိုငျငံခွားခရီးစဉျဖွဈနမေယျဆိုရငျတော့ Special Form တဈခြို့ကို ဖွညျ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ နိုငျငံခွားခရီးစဉျသှားမယျဆိုရငျ လယောဉျပျေါ၌ တာဝနျရှိဝနျထမျးမြားမှ သငျ့ရဲ့ ခရီးစဉျနဲ့ ပကျသကျတဲ့ Custom form အခြို့ကို ပေးမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့သာ ထို Form တှကေို လယောဉျပျေါမှာ မဖွညျ့ဘဲ လဆေိပျရောကျမှ ဖွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ပိုမိုမြားပွားတဲ့ Form တှကေို ဖွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၇။ လယောဉျဆိုကျပွီးနောကျ သငျ့ရဲ့ ခရီးဆောငျအိတျကို ကိုယျတိုငျကိုယျကြ သှားယူရမှာဖွဈပါတယျ။
လယောဉျဆိုကျပွီး လဆေိပျရောကျပွီဆိုတာနဲ့ ခရီးဆောငျအိတျတှကေို Conveyor Belt (ခရီးဆောငျအိတျ သယျယူပို့ဆောငျရေး) မှာ မိမိရဲ့ Boarding Pass ပျေါမှာပါတဲ့ လယောဉျ နံပါတျနဲ့ တိုကျစဈပွီး ကိုယျတိုငျ သှားရှေးယူရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာတော့ ခရီးဆောငျအိတျ သယျယူပို့ဆောငျရေးဟာ အချြိနျကွာတတျတာကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ အိတျတှကေို မတှလေို့ဆိုပွီး မလနျ့သှားပါနဲ့။
၁၈။ လယောဉျတျောတျောမြားမြားမှာတော့ ထိုငျခုံတိုငျးမှာ Persoanl TV Screen တှေ ပါရှိပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ လယောဉျစီးနခြေိနျမှာ အပငျြးပွေ ကွညျ့ရှုနားဆငျဖို့အတှကျ သီခငျြးတှေ၊ ရုပျရှငျတှကေို Download ဆှဲသှားသငျ့ပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး တဈခြို့ လယောဉျတှမှောတော့ ထိုငျခုံတဈခုံခငျြးစီအလိုကျ Personal TV Screen တှေ ပါရှိပါတယျ။
၁၉။ ရဓောတျပွညျ့ဝအောငျ နဖေို့လညျး အရေးကွီးပါတယျ။
လယောဉျပျေါ၌ သဘာဝလရေရှိမှုမရှိသောကွောငျ့ သငျ့အသားအရညျကို ခွောကျသှစေ့နေိုငျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ရဓောတျခမျးခွောကျခွငျးမဖွဈရလအေောငျ ရမြေားမြားသောကျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၂၀။ Neck Pillow ကို ယူဆောငျသှားပါ။
တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ လယောဉျပျေါမှာ နာရီအတျောကွာ စီးနငျးလိုကျပါရမယျဆိုရငျ သငျ့အတှကျ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစမေယျ့ အရာတှကေို ယူဆောငျသှားသငျ့ပါတယျ။ ခွုံစောငျ တဈထညျ၊ ခွဖြေား လကျဖြားတှေ နှေးနှေးထှေးထှေးဖွဈစနေိုငျမယျ့ ခွအေိတျ၊ လကျအိတျတှသောမက လညျပငျးမှာ စှပျထားလို့ရတဲ့ ခေါငျးအုံးကလညျး သငျခရီးသှားရာမှာ သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
၂၁။ လကွေောငျးလိုငျးပျေါမူတညျပွီး အစားအသောကျတှကေလညျး ကှားခွားနိုငျပါတယျ။
သငျ့ခရီးစဉျဟာ တိုတောငျးတယျဆိုရငျတော့ ထမငျးတဈနပျသာ ရရှိမညျဖွဈပွီး အခြိနျကွာမွငျ့စှာ စီးနငျးလိုကျပါရမယျဆိုရငျ တဈကွိမျထကျမက ပိုမို ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
၂၂။ လယောဉျဆိုကျဆိုကျခငျြး အလငျြစလို မထလိုကျပါနဲ့။
လယောဉျပျေါမှ တာဝနျရှိသူတှမေပွောမခငျြး မိမိရဲ့ ထိုငျခုံနရောမှာပဲ စိတျရှညျလကျရှညျ ထိုငျစောငျ့နရေပါမယျ။ လယောဉျပျေါမှ ဆငျးလို့ရပွီပွောတော့မှသာ မိမိပစ်စညျးတှကေိုယူ၍ လယောဉျပျေါမှ ဆငျးရပါမယျ။
သငျ့အနနေဲ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ လယောဉျစီးပွီး ခရီးထှကျမယျဆိုရငျ လူပငျပနျး စိတျပငျပနျးရုံသာမက အခွားအခကျအခဲတှလေညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး စိတျမပူပါနဲ့ . . . အထကျမှာ ဖျောပွပေးထားတဲ့ အခကျြအလကျတှအေတိုငျးသာ လိုကျလုပျမယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ခကျခဲမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ လယောဉျပျေါကနေ မွငျတှရေ့မယျ့ မွငျကှငျးတှကေလညျး သငျ့အတှကျ အဖိုးဖွတျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး . . .
သင့်အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လေယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် အခြေခံအားဖြင့် သိထားသင့်သည့်အချက်များ။
၁။ လေယာဉ်ပေါ်ကို သယ်ဆောင်ခွင့်မပြုသည့် ပစ္စည်းများကို သိရှိအောင် အရင် ပြုလုပ်ပါ။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ခရီးထွက်ဖို့ အထုပ်အပိုးပြင်တော့မယ်ဆိုရင် သင် ယူဆောင်လာမယ့် ပစ္စည်းတွေဟာ လေယာဉ်ပေါ်ကို သယ်ဆောင်ခွင့်ပြု၊ မပြု အရင်ဆုံးသိအောင် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှသာ အထုပ်အပိုးထည့်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ လေဆိပ်သို့ မသွားမီ မိမိသွားရမယ့် Terminal နံပါတ်ကို သိအောင် လုပ်ပါ။
အထူးသဖြင့် လေဆိပ်ကြီးတွေမှာဆိုရင် Terminal တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရမ်းဝေးကွာနေတတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိသွားရမယ့် Terminal နံပါတ်ကို ကြိုတင်သိရှိမယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ လေယာဉ်မထွက်ခွာမီ လေဆိပ်မှာ စောင့်နေရမယ့်အချိန်တွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
မုံမှန်အားဖြင့် ပြည်တွင်းခရီးဆိုရင် (၂)နာရီ၊ ပြည်ပခရီးဆိုရင် (၃)နာရီ လေယာဉ်မထွက်မီအလျင် လေဆိပ်သို့ရောက်အောင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့ လေယာဉ်စောင့်ဆိုင်းနေရမယ့် အချိန်မျိုးမှာ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်အောင် မိမိလုပ်စရာရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်သွားသင့်ပါတယ်။
၄။ Check in လုပ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
ပုံမှန်အားဖြင့် လေယာဉ်မထွက်ခွာမီ တစ်နာရီအလိုဖြစ်စေ၊ Online ကနေ အချိန်စော၍ဖြစ်စေ ကြိုတင် Check in လုပ်လို့ရပါတယ်။ မိမိထိုင်ချင်တဲ့ နေရာကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်လို့ရတာကြောင့် Check in စောစော ပြုလုပ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
၅။ အရေးကြီးပစ္စည်းများကို လက်ကိုင်အိတ်ထဲသို့ ထည့်၍ မိမိနဲ့အတူတူ သယ်ဆောင်သွားပါ။
လေယာဉ်ပေါ်သို့ ခရီးဆောင်အိတ်ကို မိမိနဲ့အတူတူ ယူဆောင်သွားလို့မရပေမယ့် လက်ကိုင်အိတ် (Hand Carry) တော့ ယူသွားလို့ရပါတယ်။ ဖုန်း၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ Lap Top ၊ Passport နဲ့ အခြားအရေးကြီးပစ္စည်းများကို ထိုလက်ကိုင်အိတ်ထဲသို့ ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။
၆။ အပြင်မှာ ပူသည်ဖြစ်စေ၊ အေးသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိနဲ့အတူ လေယာဉ်ပေါ်သို့ ဆွယ်တာတစ်ထည် ယူဆောင်သွားပါ။
မိမိသွားမယ့် နေရာအပေါ် မူတည်ပြီး ပြင်ပ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အပူချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လေယာဉ်ပေါ်တွင် အလွန်အေးနိုင်သောကြောင့် ဆွယ်တာတစ်ထည် ယူဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။
၇။ ခရီးဆောင်အိတ် အများကြီး သယ်ဆောင်သွားခြင်မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လေယာဉ်ပေါ်သို့ သယ်ဆောင်လို့ရတဲ့ အလေးချိန်ပမာဏကို သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ယူဆောင်သွားလို့ရတဲ့ ပမာဏနဲ့ ချိန်ဆပြီး ခရီးဆောင်အိတ်ကို ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
၈။ ခရီးရှည်ဖြစ်ပါက သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အဝတ်အစားကိုသာ ဝတ်ဆင်ပါ။
သင့်ရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ ပက်သက်ပြီး အရမ်းကြီး မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အဓိကကတော့ အကြာကြီးသွားရမယ့် ခရီးရှည်တစ်ခုကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် သွားဖို့ကသာ အရေးကြီးပါတယ်။
၉။ လုံခြုံရေးအရ စစ်ဆေးခံရပြီးနောက် လေယာဉ်ထွက်ခွာမည့်နေရာတွင် စောင့်ဆိုင်းပါ။
လုံခြုံရေးအရ စစ်ဆေးခံရပြီးနောက်ပိုင်း သင့် လေယာဉ်ထွက်ခွာမည့် ဂိတ်ကို သိရှိအောင် လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ Boarding Pass တွင်သာမကပဲ လေဆိပ်အတွင်းရှိ Monitor အချို့မှာလည်း လေယာဉ်ထွက်ခွာမည့် Gate ကို ဖော်ပြပေးနေပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ လေယာဉ်ပေါ်တက်ကာနီးတွင် သင့်ရဲ့ ထွက်ခွာခွင့် (သို့) Passport ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ ထွက်ခွာခွင့် (သို့) Passport နဲ့ အခြားသက်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ဂရုစိုက်၍ လက်ကကိုင်ဆောင်သွားပါ။ တကယ်လို့ ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ Passport ပြစရာ မလိုပါဘူး။
၁၁။ လေယာဉ်စီးနေချိန်တွင် ပီကေဝါးခြင်းက သင့်ကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
လေယာဉ် ထွက်ခွာချိန်နဲ့ လေယာဉ် ဆိုက်ရောက်ချိန်တို့တွင် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသော လေထုအပြောင်းအလဲကြောင့် နားအူခြင်း၊ နားပိတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဖိအားအချို့ကို လျော့ကျဖို့ဆိုရင် နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားပြီး ပါးစပ်ဖြင့် လေကို ရှူထုတ်ပေးပါ။ နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် ပီကေဝါးနေခြင်းကလည်း လေဖိအားအပြောင်းအလဲဒဏ်ကို သက်သာစေပါတယ်။
၁၂။ ပြတင်းပေါက်နဲ့ ကပ်လျက်ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ လေယာဉ်နဲ့ ပထမဦးဆုံး ခရီးသွားဖူးတာဆိုရင် အပေါ်စီးမှ မြင်တွေ့ရမယ့် သဘာဝရှုခင်း၊ မြင်ကွင်းတွေကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (တကယ်လို့ ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာသာ ထိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့) ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရှုခင်းတွေ၊ မြင်ကွင်းတွေကို ရိုက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဖုန်းကို အဆင့်သင့်ထုတ်ထားပါ။ (Airplane Mode တော့ လုပ်ထားပေးဖို့ လိုပါတယ်နော် . . .)
၁၃။ လေယာဉ်ပထမဆုံးစီးဖူးတဲ့သူဆိုရင် လေယာဉ်မူးခြင်းဒုက္ခကို ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ ပျင်းဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တောင် ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ မူးဝေပြီး အော့အန်ချင်တယ်လို့ ခံစားရတယ်ဆိုရင် သင့်ထိုင်ခုံမှာ အသင့်ရှိနေတဲ့ အိတ်ကို အသုံးပြုလို့ရပြီး လေယာဉ်ပေါ်မှ တာဝန်ရှိသူတွေထံမှ သောက်ရေကို တောင်းလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ အခြေအနေဆိုးတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရပါက (ရာသီးဥတု ဆိုးရွားခြင်း၊ မြူနှင်းများ ဖုံးနေခြင်း) လေယာဉ်မှူးမှ ကြိုတင် သတိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖုန်းကို Airplane Mode လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
လေယာဉ်ပေါ်သို့မတက်မီ စာပို့ခြင်း၊ ဖုန်းပြောခြင်းနဲ့ အခြား ဖုန်းအသုံးပြု၍ လုပ်စရာရှိသည့် ကိစ္စရပ်များကို အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လေယာဉ်ပေါ်သို့ ရောက်ပြီဆိုတာနှင့်တပြိုင်နက် သင့်ဖုန်းကို Airplane Mode လုပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ နားပိတ်တဲ့အဆို့ကိုလည်း လိုရမယ်ရ ဆောင်သွားပါ။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ခရီးရှည်သွားရမယ်ဆိုရင် အော်ဟစ်ငိုယိုနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ အိပ်သည့်အခါ ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အနားယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် လိုရမယ်ရ နားပိတ်တဲ့အဆို့လေးကို ယူဆောင်သွားဖို့လည်း အကြံပြုပါရစေ။
၁၆။ သင်သွားမယ့်ခရီးစဉ်က နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Special Form တစ်ချို့ကို ဖြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်သွားမယ်ဆိုရင် လေယာဉ်ပေါ်၌ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမှ သင့်ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ Custom form အချို့ကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့သာ ထို Form တွေကို လေယာဉ်ပေါ်မှာ မဖြည့်ဘဲ လေဆိပ်ရောက်မှ ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုမိုများပြားတဲ့ Form တွေကို ဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇။ လေယာဉ်ဆိုက်ပြီးနောက် သင့်ရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ဆိုက်ပြီး လေဆိပ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်တွေကို Conveyor Belt (ခရီးဆောင်အိတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) မှာ မိမိရဲ့ Boarding Pass ပေါ်မှာပါတဲ့ လေယာဉ်နံပါတ်နဲ့ တိုက်စစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် သွားရွေးယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ခရီးဆောင်အိတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာ အချိ်န်ကြာတတ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ အိတ်တွေကို မတွေ့လို့ဆိုပြီး မလန့်သွားပါနဲ့။
၁၈။ လေယာဉ်တော်တော်များများမှာတော့ ထိုင်ခုံတိုင်းမှာ Persoanl TV Screen တွေ ပါရှိပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ လေယာဉ်စီးနေချိန်မှာ အပျင်းပြေ ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့အတွက် သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကို Download ဆွဲသွားသင့်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း တစ်ချို့ လေယာဉ်တွေမှာတော့ ထိုင်ခုံတစ်ခုံချင်းစီအလိုက် Personal TV Screen တွေ ပါရှိပါတယ်။
၁၉။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် နေဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်၌ သဘာဝလေရရှိမှုမရှိသောကြောင့် သင့်အသားအရည်ကို ခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း မဖြစ်ရလေအောင် ရေများများသောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂၀။ Neck Pillow ကို ယူဆောင်သွားပါ။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ နာရီအတော်ကြာ စီးနင်းလိုက်ပါရမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အရာတွေကို ယူဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။ ခြုံစောင် တစ်ထည်၊ ခြေဖျား လက်ဖျားတွေ နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်စေနိုင်မယ့် ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်တွေသာမက လည်ပင်းမှာ စွပ်ထားလို့ရတဲ့ ခေါင်းအုံးကလည်း သင်ခရီးသွားရာမှာ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၂၁။ လေကြောင်းလိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး အစားအသောက်တွေကလည်း ကွားခြားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခရီးစဉ်ဟာ တိုတောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ထမင်းတစ်နပ်သာ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ စီးနင်းလိုက်ပါရမယ်ဆိုရင် တစ်ကြိမ်ထက်မက ပိုမို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၂။ လေယာဉ်ဆိုက်ဆိုက်ချင်း အလျင်စလို မထလိုက်ပါနဲ့။
လေယာဉ်ပေါ်မှ တာဝန်ရှိသူတွေမပြောမချင်း မိမိရဲ့ ထိုင်ခုံနေရာမှာပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ထိုင်စောင့်နေရပါမယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းလို့ရပြီပြောတော့မှသာ မိမိပစ္စည်းတွေကိုယူ၍ လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းရပါမယ်။
သင့်အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လေယာဉ်စီးပြီး ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင် လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းရုံသာမက အခြားအခက်အခဲတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ . . . အထက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအတိုင်းသာ လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ခက်ခဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် လေယာဉ်ပေါ်ကနေ မြင်တွေ့ရမယ့် မြင်ကွင်းတွေကလည်း သင့်အတွက် အဖိုးဖြတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး . . .
Previous ကွောငျလေးတှဟော သူတို့ရှာဖှသေတျဖွတျထားတဲ့ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အိမျသို့ယူဆောငျလာလရှေိ့တာက ဘာကွောငျ့လဲ ? ? ?
Next ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး တနျဖိုးအကွီးမားဆုံးဖွဈလာတော့မယျ့ ကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။